Shiinaha sanduuqa kartida sanduuqa hadiyad qaab sanduuqa saaraha tayo sare leh soo saaraha iyo qeybiye | Huaguang
Kartoo sanduuqa hadiyad qaab wareega la tayo sare leh sanduuqa dhigay
wareegsan sanduuqa hadiyadda
Cabir: 30 * 30 * 20cm
Faahfaahinta Baakadaha: saddex kumbuyuutar oo ku jira polybag ama shuruudahaaga
Naqshadaynta baakadu waa sahamin firfircoon oo adduunka ah oo leh aragtida muuqaalka oo ah xarunta iyo afarta kale ee dareemayaasha ah sida kaaliyaha. Nolosha, badeecad kastaa waxay si xoog leh u kicisaa dareenka dadka siyaabo kala duwan, taasoo keenta rabitaanka wax iibsashada. Waxaa la dhihi karaa in soo jiidashada baakadu ay tahay bulsho casri ah oo isticmaaleysa "shanta dareen" halkii ay suuq ahaan u soo jiidan lahaayeen. Maanta, aan ka hadalno naqshadeynta baakadka iyada oo loo marayo sanduuqa hadiyadeed ee wareega ah:
Aragtida ayaa ah xarunta farshaxanka iyo naqshadeynta, iyadoo bartanka naqshadda farshaxanka muuqaalka ah meel walba lagu arki karo, midabka naqshadeynta baakadaha, sawirada, qoraalka, qaabka, iwm, waxay ku saleysan yihiin muuqaal ahaan xarunta loo qaabeeyo, iyadoo loo marayo cunsurrada muuqaalka ah iyo adeegsiga macquulka ah iyo isku darka, si ay u soo jiitaan macaamiisha, u sameystaan ​​xiisaha macaamilka, ugu dhiirrigeliyaan macaamiisha inay iibsadaan. Waxyaabahaas baakidhka ah ee muuqaalka ah, midabku, sida cunsurka muuqaalka ugu muhiimsan, wuxuu u noqday qaab luqadeed muhiim u ah naqshadeeyayaasha.
Iyo naqshadeynta sanduuqa hadiyadda, badiyaa uma baahna qoraal aad u tiro badan, sida sanduuqa hadiyaddan wareega ah, eray uma aha. Sanduuqyada hadiyadaha qaarkood ayaa sidoo kale lagu daabici doonaa ereyo fudud, sida salaanta ama muujinta jacaylka.
Midabku wuxuu dadka ka dhigi karaa inay soo saaraan urur la taaban karo iyo mid la taaban karo, sida midabka diiran oo dadka ka dhigaya inay ka fikiraan qorraxda, dabka, ama waxyaabaha gardarrada ah, midabka qabowna wuxuu dadka ka dhigi karaa inay la midoobaan biyo, hawo, inay ka fekeraan caqli iyo degganaanta tayada shaqsiyadda.
Sanduuqa hadiyaddu waa casaan dhalaalaya, midabka noocan oo kale ah ayaa soo jiidan kara indhaha macaamiisha, muuqaal ahaan si loo soo jiito dareenka macaamiisha.
Marka labaad, xiriirka ka dhexeeya walxaha muuqaalka iyo macaamiisha dhinacyada dhaqaalaha iyo dhaqanka waxaa loola jeedaa in macaamiisha kala duwan ay leeyihiin awood dhaqaale oo kala duwan iyo heerar dhaqan iyo waxbarasho. Qaddarinta ay u hayaan quruxda iyo tayada nolosha ayaa ka duwan, oo ka muuqata aqbalida midabka iyo walxaha kale ee muuqaalka ah, waxaa jiri doona farqi weyn. Sidaa darteed, naqshadeynta baakadaha waa inay si taxaddar leh u doorataa midabka ku habboon, sawirada iyo walxaha taabashada.
Ugu dambeyntiina, isku xirka ka dhexeeya walxaha muuqda iyo deegaanka ay ku noolyihiin macaamiisha ayaa ka dhigan in xirmada ay had iyo jeer ku jirto deegaanka u gaarka ah nolosha macaamiisha. Sidaa darteed, midabka iyo muuqaalka maqaallada kaladuwan ee isticmaalka maalinlaha ah ee laxiriira xirmada waa in lagu tixgeliyaa qaabeynta xirmada, si looga dhigo sawirka baakadaha muuqaal ahaan la jaan qaadaya deegaanka ay ku noolyihiin macaamiisha.
Naqshad badan oo ka mid ah sanduuqa hadiyadeed, waa inay muujisaa waxyaabaha la doonayo in loogu bandhigo macaamilka iyada oo loo marayo naqshadeynta. Sanduuqyada hadiyadaha qaarkood, si kastaba ha noqotee, waa kuwo aad u fudud, sida qaababka sanduuqyada fudud iyo kuwa guud, ama isticmaalka midabbada adag, sidoo kale waxay ka dhigayaan sanduuqyada hadiyadu inay noqdaan kuwo caadi ah oo waara. Sida sanduuqa hadiyadeed wareega ah, qaabkiisa fudud ma qarin karo qalbiga diirran ee kan wax bixinaya.
Hore: dabool sanduuqa sanduuqa qafisyada jiingado jiingado
Xiga: Sanduuqa carruurta lagu ciyaaro ee loogu talagalay carruurta boorsada warqadda kartoonada leh ee gacanta lagu hayo